Hụ nhazi UTM na Google Maps na Street Street - Geofumadas
Nzọụkwụ 1. Download data feed template. Agbanyeghị na edemede na-elekwasị anya na ndị nhazi UTM, ngwa a nwere latitude na longitude ndebiri nwere ogo ntụpọ, yana ogo, nkeji na nke sekọnd.
N'ihe banyere njikọta latlong, ọ dị mma na latitude anaghị agafe ogo 90 ma ọ bụ na ogologo ogologo gafere 180.
Ịdebanye akara ngosi na eserese ngosi ị nwere ike ịnweta vidiyo nke eserese n'okporo ámá ma ọ bụ na 360 echiche ndị ọrụ.
Nzọụkwụ 4. Nweta nhazi map. Enwere ike itinye ihe na tebụl efu ma ọ bụ na nke sitere na Excel; a ga-egosipụta nhazi ahụ dabere na ndebiri ahụ, tinye nọmba kọlụm na-akpaghị aka yana ịgbakwunye na nkọwapụta nke esitere na maapụ ahụ.
Budata Kml maapụ ma ọ bụ okpokoro dị oke mma site na iji ọrụ gTools.
Code tinye koodu nbudata wee nwee faịlụ ị nwere ike ịlele na Google Earth ma ọ bụ mmemme GIS ọ bụla; Ngwa ahụ na-egosi ebe ị ga-enweta koodu nbudata nke ị nwere ike ibudata ruo oge 400, na-enweghị oke oke ole oghere nwere ike ịbụ na nbudata ọ bụla site na iji gTools API. Map a na egosiputa nhazi site na Gooogle Earth, ya na uzo ihe nlere ato di iche.
Na mgbakwunye na kml ị nwekwara ike ibudata na usoro kachasị mma na UTM, latitude / longitude in desimals, digri / nkeji / sekọnd na ọbụna dxf iji mepee ya AutoCAD ma ọ bụ Microstation.
Na vidiyo na - esote ị ga - ahụ ka ebudatara data na atụmatụ ndị ọzọ nke ngwa ahụ.
Lee ị ga-ahụ ọrụ a na peeji zuru ezu.
Previous Post«Previous Download ma wụnye ArcGIS Pro
Next Post Nzọụkwụ iji soro ekwentịNext »
2 Azịza na "Lee nhazi UTM na Google Maps na Street Street"
Ndewo, ụtụtụ si Spain.
Ngwa mmasị, iji nweta data ruru.
Ọ bụrụ na achọrọ data ma ọ bụ nhazi na nkenke, ọ ga-abụ ihe amamihe dị na ya iji ụda onyonyo eji ndị ọkachamara ruru eru.
Mgbe ahụ ọ nwekwara ike ime na eserese ahụ bụ ihe mgbe ochie na data achọrọ adịkwaghị ma ọ bụ kpalie ya. Have ga-ahụ ụbọchị mgbe Google "gafere."
Danut kwuru, sị:
June, 2019 na
Kedu etu ebe edere Excel na mpaghara 35T maka Romania? Maka m anaghị arụ ọrụ. Ọ bụrụ na m tinye 35 na egosi naanị m nhazi na Central Africa?